Qarax gaari oo ka dhacay agagaarka KM-0 ee magaalada Muqdisho (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Qarax gaari oo ka dhacay agagaarka KM-0 ee magaalada Muqdisho (Sawirro) * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Qarax gaari ayaa maanta ka dhacay agagaarka KM-0 ama Baar FIAT ee magaalada Muqdisho, kaasoo aan wax badan ka fogeyn xarrunta Hay’adda Nabad Sugidda ee loo yaqaano Habar Khadiijo ee ku yaalla degmada Shibis.
Qaraxa ayaa ka dhacay baar la sheegay iney fariistaan ciidamada Nabad sugidda Soomaaliya, iyadoo goobta ay joogeen shacab farabadan.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxaaas ka dhacay nawaaxiga KM-0 ee Magaalada Muqdisho, halkaasi oo qarax lala eegtay goob maqaayad ah oo ciidanka Nabadsugida iyo dad shacab ah ay fariistaan.
Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa loo adeegsaday, qaraxan waxaana halkaasi ku dhintay ku dhawaad sideed ruux oo ciidanka dowladda gaar ahaan kuwa Nabadsugida iyo dad shacab ah isugu jira.
Bartilmaameedka qaraxa ayaa wuxuu ahaa ciidanka Nabadsugida oo badanaa fariisto maqaayad ku taala nawaaxiga KM-0, halkaasi oo uu gaariga ku qarxay.
Gaadiidka Gurmadka deg deg ee Amabalaaska ayaa qaaday dhaawacyo kala duwan oo ciidanka soo gaaray, waxaana ciidamada qaarkood la geeyay isbitaal ku yaala Degmada Xamarweyne oo inta badan ciidamada dhaawaca la geeyo.
Waxaa xiran wadada laamiga ah ee KM-0, waxaana guud ahaan goobta isku gadaamay ciidamada Booliiska iyo kuwa Nabadsugida.
Goobta qaraxu ka dhacay ayaa waxaa yaalla gaari kale oo looga shakisan yahay iney ku xiran yihiin walxaha qarxa, waxaana garrigaas la sheegay in burbur kooban gaaray.
Ma jirto cid weli sheegatay qaraxaas, sidoo kale weli dowladda Soomaaliya kama hadlin qaraxaas iyo khasaaraha ka dhashay.